अहिले व्यापारी राजनीतिमा लागे राजनीतिज्ञ व्यापारमा लागे « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
अहिले व्यापारी राजनीतिमा लागे राजनीतिज्ञ व्यापारमा लागे
“अहिले व्यापारी राजनीतिमा लागे राजनीतिज्ञ व्यापारमा लागे”
चेम्बर आन्दोलनमा लागेको ३० वर्ष भईसकेको छ । व्यवसायीक हकहितका लागि जिल्लामा रहेर धेरै सेवा गरियो । अब केन्द्रमा नीतिगत मामलामा आफ्नो विचार प्रकट गर्दै योगदान दिनुपर्नेछ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २ नं क्षेत्रको उम्मेदवारी बनेको छु । अलिकति दुःख लागेको कुरा “अहिले व्यापारी राजनीतिमा लागे राजनीतिज्ञ व्यापारमा लागे” यो अलि पचिरहेको छैन । हामीले बाटो बिराउनु हुँदैन, व्यापार गर्ने,राजश्व बुझाउने, देशलाई आर्थिक गति प्रदान गर्ने हाम्रो धर्म हो । यता राजनीतिज्ञले पनि व्यापार गर्न सुहाउन्न । उनीहरुले देशलाई हाँक्ने हो । नीति बनाउने हो, सबैलाई समेटेर अगाडि बढाएर लैजाने हो ।
उद्योग ,व्यापार र व्यवसायमा छोटो समयमा नाफा कमाउछु भनेर देखासिकी नगरौं
म व्यवसायीक क्षेत्रमा सबैको प्यार पाउने मान्छेको रुपमा आफुलाई चिनाउन चाहन्छु । त्यसैले पनि महासंघमा समय दिउं भन्ने लागेको छ । सबै उद्योग ,व्यापार र व्यवसायमा लाग्न चाहनेलाई भन्छु कि छोटो समयमा नाफा कमाउछु भनेर देखासिकी नगरौं । त्यस्तै राजनीतिक पृष्ठपोषण(टेन्डर, सिन्डकेट) लगायत विकृति हटाउँदै शुद्धिकरण गर्नुपर्नेछ ।
६०/७० वर्षको अबधिमा खास घरानाले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा राखिरहेको छ
देशलाई खतरनाक मोडबाट जोगाउनुपर्नेछ । पहिले राणाकालमा जस्तै विगत ६०÷७० वर्षको अबधिमा खास घरानाले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा राखिरहेको छ । त्यसको पञ्जाबाट निकाल्नु अहिलेको चुनौति हो ।
महासंघमा जित्नेले थप कार्यभार सहित चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ
यस्तै एफएनसीसीआईमा जो उठिरहेका छौं, उहाँहरु सबै क्षमताबान हुनुहुन्छ । कसैले घमण्ड गर्नुहुन्न । जित्नेले थप कार्यभार सहित चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ हार्नेले फेरी अर्काेचाटी जित्छ । हामी सबै मिलेर जित्नेहरुलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । जुन कर्ममा लागेका छौं इमान्दारीपूर्वक लागौं, राजनीति र व्यवसायलाई फरक–फरक ढंगले हेरौं भन्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत २६
सांग्रीला डिस्टीलरीले भित्राउदैं गरेको ४ लाख थान नक्कली स्टिकर बरामद, संचालक फरार
नरेश के.सी. भैरहवा । करिब १४ वर्ष पहिले रुपन्देहीको सुन्डीमा रहेको त्रिवेणी डिस्टीलरीले करोडौं रकम
प्रकृति कपास गोदाममा आगलागी
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका– १० रिजाल चोकस्थित प्रकृति कपास उद्योगको गोदाममा आज बिहान आगलागी हुँदा
यी हुन् नेपालका सर्वाधिक ५ धनी ? जो विश्वमै चर्चित छन्
हामीले धेरैको मुखबाट सुन्ने गर्छौं हाम्रो देश पो गरिब त यहाँका मान्छे त जति पनि